Mucaaradkii Puntland oo fashilmay | allsanaag
Mucaaradkii Puntland oo fashilmay
1st December 2021 admin Category :
Reer Puntland ma doonayaan Dimoqraadiyadda beelaysan ee la midka ah dhaqankii Puntland Curyaamiyey
Doorashaddii taariikhiga ahayd ee dhowaan ka dhacday qaybo ka mid ah degaanada Puntland waxay ahayd mid aad loogu farxay oo ay dad badani soo dhoweeyeen gaar ahaan bulshada Puntland.
Doorashdan oo ahayd mid tijaabo ah, ayaa Bulshada reer Puntland iyo madaxdooduba waxay Caalamka iyo Soomaalidaba tuseen inay ka daaleen nidaamkii qabiiliga ah ee wax lagu dooran jiry sida 4.5 iyo 66ka Xildhibaa ee soo doorta madaxda Puntland.
Shacabka sadexda degmo ee Eyl, Qardho iyo Ufeyn ee nasiibka u yeeshay in lagu tijaabiyo doorasha la doonayo in Mustaqbalka ay ka dhacdo Puntland, ayaa ahaa kuwa aan waxba ka duwanayn siday diyaarka ugu ahaayeen dalalka inta badan soo qabsanayey doorashooyinka. Waxay ahaayeen kuwa aad u soo camiray goobihii codaynta oo aad isu ixtiraamayey , dhegaysanayey awaamiirta Guddiga doorashada iyo shaqaalaha goobta, Inaa waxa u sii dheeraa amniga oo sugnaa oo haba yaraatee wax rabshado ah aynaka dhicin.
Maxaa kale oo tijaabo ahaa?
Waxa kale oo dhinac socday Doorashadan Tijaabada ahayd ee bisha 25keedii ka dhacday degaanada Puntland tijaabo kale oo ahayd madaxda maamulka Puntland uu yeelan doona kuwa ay yihiin iyo sida u gacan qabanayaan Dimoqraadiyadda Cusub ee aynu maanta ku wada faraxanahay oo u baahan Midnimo iyo kalsooni
Madaxda Ururka Kaah, ee uu hogaamiyo Madaxweyne Deni, intii itaalkooda ahayd waa ku dedaaleen sidii doorashadu u noqon lahayd mid xor ah oo Sanduuqa codka lagu ridayo loo wada siman yahay . Warbaahinta Dawladduu waxay ahayd mid loo wada siman yahay.
Arinta ugu weyn ee Ururka Kaah lagu amaani karo waa Uurur ay ka wada muuqdaan beelaha Puntland. ,madaxweyne ku xigeenka Puntland intii doorashadu soctay wuxuu ka ololeenayey degmada Ufeyn, taasina waa bilow wanaagsan iyo Midnimada oo sii xoogsata
Nasiib daradda ugu xumayd ee doorashdda Puntland ee tijabada ahayd aynu ka baranay waxay ahayd, waa Ururada Mucaaradka oo la mid noqday Xisbiyaddii beelaha ee Lixdameeyaddii, kuwa beelaha Isaaq ee sadexda ah ee mid ka mid ah Faysal Dhurwaa uu madax ka yahay iyo 33kii Xildhibaan ee baarlamaanka Puntland ee madaxweynaha ku dooran jiray beel ahaan.
Madaxda Mucaaradka oo hadda u muuqda inaanay xaafadahooda soo dhaafeen, ayaa maalintii shalay sameeyey arin fool xun, ka dib markii laba hogaamiye oo ka soo wada jeeda Beesha Cismaan Maxamuud ee Majeerteen ay warbaahinta soo hor istaageen oo sheegeen inay ku heshiiyeen inay maamul degmooyinka u soo wada samaynayaan, Halka uuna goobtaas ku sugnayn ama ka muuqan hal qof oo ka soo jeeda beelaha kale ee reer Puntland.
Gudoomiyaasha iyaga oo degaankoodii joogaee garan waayey , doorashadu tijaabo ayeey ahayd ee sawir kii hore ee qabiilka ahaa ka duwan umadda u soo bandhiga oo iska soo hor mariya siyaasiyiinta kale ee reer Puntland si loogu arko inay Puntland wada metelaan, diyaar uma aha in loo codeeyo ama wax hogaamiyaan. Maalintii shalay ayeey fashilmeen waana abtirsadeen, Waana ka shalaayi doonaan.
Ummadyahay Qabiilkiyo Qaranimadu Waa Laba
Ugu danbayntii Bulsada reer Puntland ayeey u taalaa inay horay u socdaan oo ku daydaan shacabka Degmooyinka Ufayn, Qardho iyo Eyl oo ay doortaan qofka ka shaqaynaya Horumarkooda oo ilaalinaya midnimadooda ama Jebiye iyo Diyaano oo ku xiran ama ka wat qaata Mooryaanta Muqdisho , taasina bulshda reer Puntland waxay ku kaynaysaa dib u dhac
← Farmaajo oo bililiqo ka hortagay In Somalia, a rare female artist promotes images of peace →